Zvakatipoteredza: Vhura-sosi yekurwisa shanduko yemamiriro ekunze | Linux Vakapindwa muropa
Zvakatipoteredza: Vhura-sosi yekurwisa shanduko yemamiriro ekunze
Masayendisiti anga achinyevera kwemakumi emakore chii chingaitika kana pasina chakaitwa kudzikisa mweya uye kudzikira shanduko yemamiriro ekunze. Kune rimwe divi, hurumende dzese dzemavara akasiyana dzakatenderedza nzeve, dzichienderera zvakafanana kana neakareruka marongero ezvemamiriro ekunze asina kuchinja chero chinhu.
Zvese fungidziro izvo masayendisiti akazivisa zvakaitika, uye izvozvi vakagadzira mushumo mutsva nawo kufungidzira kune njodzi kuenderera seizvi. Vachaita chimwe chinhu ikozvino? Zvakanaka, zvinorwadza kufunga kuti hazvizove zvakadaro, asi ndinofunga vacharamba vasina kuteerera kune nyanzvi ...
Nekudaro, yega yevagari vanogona zvakare isa masendi ako maviri, uye pakati pevose edza kuburitsa nekusvibisa zvishoma. Kubva pakushandisa zvirinani zvekufambisa kwevanhu, kufamba kana kuchovha bhasikoro, kushandisa zvishandiso zvekushandisa zvakaderera, nezvimwe zvakawanda. Uye zvakare, iwe unofanirwa kuziva kuti kune akawanda akavhurika-sosi mapurojekiti anogona kubatsira kupokana neshanduko yemamiriro ekunze.
ari open source mapurojekiti Vakakurumbira pakurwisa shanduko yemamiriro ekunze ndeaya:
Electricitymap Kubatsira: iwe unogona kuona mune chaiyo nguva iyo CO2 emissions inosanganiswa nemagetsi kushandiswa.
Inotyisa Nyika: Iwe uchaona 326 zvinhu zvaunogona kuita kupokana nedambudziko remamiriro ekunze.
Sustainable yakavhurika tekinoroji: runyorwa rweakavhurika uye anochengetedza tekinoroji mapurojekiti ekuchengetedza mamiriro ekunze akagadzikana.
Oceananigans.jl- Inokurumidza uye inoshamwaridzika fluid dynamics system yeCPU neGPU yekugadzirisa yekuyerera kwemvura.
GlobalWarning: chirongwa chevadi veMinecraft vanoda kudzidza nezve shanduko yemamiriro ekunze.
Bloom Contrib: chirongwa chekugadzira data yemamiriro ekunze kabhoni anowanikwa kune wese munhu.
Climate Strike Rezinesi- Software rezinesi rekudzivirira mamwe makambani emafuta uye gasi kubva mukuenderera mberi nekuwedzera mafuta emafuta.
Climatemachine.jl- Iyo yepasi system modhi iyo inodzidza zvoga kubva kudata.
Shit Utsi: Anwendung yeIOS uye Android nharembozha kuti uone kusvibiswa kwemhepo kweguta rako kuyerwa mumidzanga yakaenzana.
Mamwe makambani anoremekedza- Nharaunda yakagadzira rondedzero yemakambani ekuchenesa tekinoroji.
Shanduko Yemamiriro ekunze data: rondedzero yeAPIs, yakavhurika dhata uye ML / AI mapurojekiti pane shanduko yemamiriro ekunze.
mfn app- App yeIOS uye Android nhare mbozha kuti udzidze nezvokuderedza kabhoni tsoka.
Sustainability- Rondedzero yezvinhu zvese zvakagadzikana zvaunofanira kuziva nezvazvo.
Kudhirowa KweProjekiti: batsira nyika kuti isvike mune ramangwana kuzvipira kudzikisa magreenhouse gasi.
Liquid Kugadzirira: mhinduro yakazara yevarimi vari kutsvaga kugadzirisa mashandisirwo emvura mukudiridzira, kunyanya munguva dzekusanaya kwemvura.
Ipcc SR1.5 Kuongorora: muongorori wemamiriro ezvinhu weIPCC Chirevo nezve kudziya kwepasi kwe 1.5ºC.
Sustainable jobs: runyorwa rwemabasa munzvimbo yekusimudzira.
wildfirepy- Raibhurari yePython inoongorora GIS data pamoto wemusango.
Vegginner: app yekuvandudza mashandisiro uye kurwisa shanduko yemamiriro ekunze, uye kunyangwe kurwisa nzara munyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Zvakatipoteredza: Vhura-sosi yekurwisa shanduko yemamiriro ekunze
ScummVM: ramba uchigadzirisa